Fampianarana Android tsikelikely: araraoty tsara ny findainao | Androidsis
Rehefa miresaka isika Tutorials, izahay dia manondro ireo fampianarana na torolàlana fohy izay ampianarina ny zava-dehibe rehetra hampiasa tsara ireo vokatra na rafitra miasa ireo finday ampidiro ankehitriny, toy ny an'ny Android. Eo amin'ny tontolon'ny informatika dia mazava fa ny tutorial dia natao hanamorana ny asa rehetra ho an'ny mpampiasa, miaraka amin'ny toromarika takiana amin'ny serivisy tsara kokoa, manaraka ny baiko lojika hatrany. Ireo fampianarana amin'ny fitsipika dia mampiseho ambaratonga fototra, saingy mihasarotra izany, noho izany dia ilaina ny mamaky azy ireo tanteraka ary manana fahalalana bebe kokoa amin'ny fianarana.
Etsy ambany no hahitanao ireo fampianarana an-dàlam-pandrosoana tsara indrindra hahazoana ny ankamaroan'ny Android na hianaranao ny fomba fikirakiranao azy tsara. Tsy hainao ve ny manao zavatra amin'ny findainao na amin'ny takelakao? Amin'ity fizarana ity dia holazainay aminao ny fomba fanaovana na inona na inona amin'ny fitaovanao.
Ahoana ny fametrahana ny extension Google Chrome amin'ny Android
ny DaniPlay hace Andro 2 .
Ny iray amin'ireo zavatra nahatonga ny Google Chrome ho be mpampiasa dia ny fanitarana azy. Ny mpampiasa tsirairay dia afaka avy amin'ny ...
Ahoana ny fampidinana ireo fitaovana Daemon maimaim-poana
Na eo aza ny ankamaroan'ny fitaovan'ny solosaina, na desktop na portable, dia tsy misy mpamaky intsony ...
Ahoana ny fomba hanokafana rakitra APK amin'ny PC
Ny fisokafan'ny rakitra APK amin'ny PC dia isaina amin'ny androny. Hatramin'ny nanombohan'ny Google Play Store tamin'ny 2008, ny…
Ny kinova Android vaovao tsirairay dia misy fampiasa vaovao marobe, miaraka amin'ny fanatsarana ny fiarovana. Ho an'ny…
Mihoatra noho ny mahazatra ny mahita ny fomba mahamay be ny finday avo lenta amin'ny fahavaratra, mihoatra ny mahazatra. Na izany aza ny…
Na dia maro aza ireo mpandraharaha nijanona tamin'ny famoahana ny terminal finday, mbola hitantsika ihany ...
Ahoana ny fanamboarana kaody lesoka 910 amin'ny Play Store
Tsy misy izany rafitra fandidiana tonga lafatra izany. Tsy misy koa rafitra fiasa azo antoka 100%. Ny rafitra miasa rehetra dia mora tohina ...
Ahoana ny fametrahana ny Android 12 beta tsikelikely
Ny beta voalohany amin'ny Android 12 dia efa miaraka amintsika rehetra miaraka amin'ny vaovao mamy, ao anatin'izany ny fanavaozana ny ...
Motorola dia hitsapa ny Android Oreo amin'ny Moto G4 Plus
Telefaona BQ 10 no hanavao ny Android 9.0 Pie
Lisitry ny telefaona mifanentana amin'ny Android 9 Pie
Ny fanavaozana farany dia manome ny olan'ny bateria amin'ny OnePlus 6